Trenbolone Acetate (Tren ace) budada (10161-34-9) hplc = 98% | AASraw
Trenbolone Acetate (Trenbolone Acce) budada
/ Products / Anterolics steroids / Taxanaha budada Trenbolone / Trenbolone Acetate (Trenbolone Acetate) budada
3.00 ka mid ah 5 ku saleysan 3 ratings macaamiisha
SKU: 10161-34-9. Categories: Taxanaha budada Trenbolone, Anterolics steroids
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ah ee Trenbolone Acetate (Tren ace) budada (10161-34-9), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Dib u eegida (3)
Trenbolone Acetate (Tren ace) video budada ah
Raw Trenbolone Acetate (Tren ace) budada Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Trenbolone Acetate budada budada ah
Formula kelli: C20H24O3
Miisaankani waa: 312.4
Dhibcaha Biyaha: 90- 92ºC
Kaydinta Nabadgelyada: 0-6 ° C
Color: Budada crystalline ee huruud ah
Raw Trenbolone Acetate (Tren ace) isticmaalka budada ee wareegga steroid
Daawada Trenbolone Acetate sida caadiga ah waxaa loogu yeeraa Tren A, Tren ace budada (CAS 10161-34-9), Revalor, Finaplix, Finajet, oo ay sameeyaan xubnaha jirka ama kuwa leh UGL.
Isticmaalka budada loo yaqaan "Raw Trenbolone Acetate Acetate"
Daawada Trenbolone Acetate waxaa badanaa loo adeegsadaa qiyaasaha 35-150 mg / maalin, iyo intaa ka badan 50-100 mg / maalin.
Isticmaalayaasha intooda badan waxay helayaan 50-75 mg / maalin si ay u noqdaan qiyaasta qiyaasta daaweynta, waxay siisaa faa'iido fiican oo qayb ka ah xashiishka anabolic steroid.
Daawada Trenbolone Acetate (CAS 10161-34-9) ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa qiyaasaha 35-150 mg / maalin, iyo intaa ka badan 50-100 mg / maalin. Xaaladda 35 mg guud ahaan waxay ku haboontahay keliya marka ay leedahay dareenka shakhsiyeed ee sarreeya ee saameynta daawooyinka gaarka ah ee trenbolone. Marka isticmaalka trenbolone uu yahay mid hooseeya oo wareeg ah oo loo baahan yahay, waa in lagu daro steroid kale oo lagu mudo. Masteron waa doorasho wanaagsan ujeedadaas. Doorasho kale oo kala duwan waa testosterone.
Sida xaddiga 150 sare / shaxda, guud ahaan waxaa loo isticmaalaa ujeedada kor u qaadida habdhiska dareemayaasha marka la barbar dhigo 100 mg / maalin halkii laga sii wanaajin lahaa xoojin ballaaran ama xoog ah, kuwaas oo horayba u sarreeyay ama aad ugu dhowaaday heerka 100 mg / maalin.
Tirada miligramkani waa mid aad u hooseeya oo loogu talagalay stero-anab oo lagu mudo. Qayb ka mid ah sababaha ayaa ah in trenbolone ay tahay mid xooggan (waxtar leh per milligram). Sabab kale oo macnaheedu waa sababta oo ah aaladda asaasiga ah ayaa si aan caadi ahayn u iftiiminaya, boqolkiiba aad u sarreeya miisaanka "Trenbolone Acetate molecule" waa steroid firfircoon.
Digniinta Root Tren ace budada
Maaddaama dad badan la xusay, waa in aanad Clen u galeynin in ka badan toddobaadyada 2 oo isku xigta. Tani waa sababta oo ah dadka soo dhaweynta ahi waxay u baahan yihiin wakhti ay dib u bilaabaan, iyo Clen ma noqon doonto mid waxtar leh haddii aadan qaadan fasax, mana jirto wax ballan-qaad ah oo aad soo dhaweeyeen.
Dhibaato halis ah oo ka timaadda qalabixinta ayaa ah nolosheeda nuska ah, taas oo malaha ugu yaraan maalmaha 12. Tani waxay dhalinaysaa waqti dheer oo ah mudista ugu dambaysa ee heerarku aysan ku filneyn heer sare oo loogu talagalay anabolismka ugu wanaagsan, mana hoos u dhac ku filan si ay u suurtagasho in ay soo noqoto. Xalka dhibaatadani waa in la isticmaalo qalabixinta kaliya qaybta hore ee wareegga.
Taa bedelkeeda, saamiga trenbolone ee boqolkiiba steroid firfircoon wuxuu ku dhowaad 20% ka hooseeya. Sababtan awgeed, wadarta isugeynta toddobaadlaha ah ee loo yaqaan "trenbolone enanthate" waa wax yar oo ka sareysa asaasiga. Daawada enanthate, qiyaasta wadarta toddobaadlaha ah waa caadi ahaan mg 300-800.
Si ka duwan sida budada Trenbolone Acetate oo leh nus nus oo keliya oo ku saabsan maalinta 1 oo sidaas darteed waa in lagu mudo maalin kasta, enenthate trenbolone ayaa sida caadiga ah lagu duraa waqtiyo 2-4 asbuucii. Nolosha badhkeed waxay u egtahay maalmaha 5.
Haddii aan la hubin jawaabta shakhsiyeed ee trenbolone, dhererka 'acetate ester' ayaa loo doorbidi karaa si dhakhso ah. Sidoo kale waa mid la jecleesto isticmaalka wareega gaaban ama toddobaadyada ugu dambeeya ee wareegyada dheeraadka ah sababtoo ah nadiifinta deg-dega waxay bixisaa xawaalad degdeg ah oo ka timaad heerar sareeya oo ku habboon natiijooyinka ugu fiicnaanta ee heerarka hooseeya oo u oggolaanaya soo kabashada.
Inkastoo isticmaalka trenbolone looma baahna si loo gaaro natiijooyin fiican oo ku saabsan wareegga anomolytka, waxa uu noqon karaa kaalin waxtar leh oo ku saabsan natiijooyinka noocaas ah.
Root Tren ace budada (CAS 10161-34-9)
Trenbolone Acetate acetate point-ereyga = xNUMX-200 F / 205-90 ° C
Suuq-geynta Trenbolone Acetate Sale
III. budada ceeriin Trenbolone Acetate (Tren ace) budada HNMR
Sida loo iibsado budada Trenbolone Acetate (CAS 10161-34-9); iibso Tren ace powder from AASraw
AASRaw waxay bixisay nadiifin 99% trenbolone acetate caanaha ceymiska caanaha jirka ama sheyaalka dhulka hoostiisa ee isticmaalka duritaanka ee jimicsiga si loo helo faa'iido ballaaran, xoog korodhsi.
Trenbolone Acetate Macmacaanka
10g Budada Trenbolone Acetate
Halkee laga iibsadaa budada Trenbolone Acetate?
Sidee laysugu daraa budada trenbolone acetate?
Qofna kuma sheegi doono xaqiiqooyinka 10 ee ku saabsan Trenbolone Acetate
3 dib loogu talagalay Trenbolone Acetate (Tren ace) budada
Trenbolone Acetate (Trencece Acce) waa budo
qiimeeyay 3 out of 5
Florencia - 11 / 25 / 2018
Miyuu jiraa noocyada kale ee galmada sida viagra ee haweeneyda?
qiimeeyay 1 out of 5
Lavon - 11 / 23 / 2018
Waxaan doonayaa inaan iibsado viagra online
Testosterone Daawada budada ah
Testosterone Dufanka Acetate
Testosterone Cypionate (Cypionate Test) budada
Clenbuterol (CLEN) budada HCL
Nandrolone Nadiifinta budada